Dagaal ka dhacay duleedka Tukaraq, Sool; Gaadiid dagaal oo laga qabsaday ciidanka Somaliland. – Radio Daljir
Dagaal ka dhacay duleedka Tukaraq, Sool; Gaadiid dagaal oo laga qabsaday ciidanka Somaliland.
Tukaraq, May 30 – Waxaa maanta dagaal xoogan oo la isku adeegsadey noocyada kala duwan ee hubka uu ka dhacay inta u dhexaysa degmada Tukaraq ee gobolka Sool iyo tuuladda Higladda oo hoostagta degmaddaasi; dagaalka oo bilowday gelinkii danbe ee maanta (Isniin) ayaa waxaa uu dhexmaray ciidamo katirsan maamulka Somaliland iyo ciidamo isugu jira dadka deegaanka iyo kuwo katirsan ciidanka madaxtooyada Puntland oo fariisin ku leh deegaanka Tukaraq.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada Somaliland ee fadhigoodu yahay halka lagu magacaabo Maraaga oo 5 KM u jirta magaaladda Laascaanood ay weerar ku qaadeen barta lagu cashuuro gaadiidka ee Puntland ku leedahay duleedka magaaladda Tukaraq.
Ciidamadda maamulka Somaliland ayaa dib looga riixey goobtaasi sida ay idaacadda Daljir u xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah oo kusugan deegaanadda lagu dagaalamay waxaana xiligan la isku hor fadhiyaa tuuladda lagu magacaabo Higladda oo hilaaddii 20KM dhanka Laascaanood ka xigta degmada Tukaraq ee gobolka Sool.
Dagaalka oo ahaa mid khasaare geystey ayaa soconayey mudo saacado ah sida la sheegay, inta la ogyahayna waxaa ku dhawaamacmay ilaa laba askari oo ciidanka Puntland ah, maamulka Somaliland ayaa laga qabsaday laba gaari oo nooca dagaalka ee Tiknikadda loo yaqaano; noocyada baabuurtaasi ayaa lagu sheegay in mid kamid ah uu yahay gaari uu saaran yahay qorilga lagu magacaabo Baroon 50, halka mid ka kalena uu saaran yahay qori laba dhuumood ah kaasi oo magaciisa lagu sheegay Suu ama Suug, waxaana la ogayn khasaaraha dhanka nafta ah ee ciidamda Somaliland soo gaadhey walow la sheegay inay jiraan askar ka dhaawacantay balse aan tirsigooda naloo xaqiijin.
Xabadda ayaa hakatay gabal dhicii caawa waxaana wararku sheegayaan in xiligan la isku horfadhiyo Higladda iyadoo laga cabsi qabo in dagaalo hor lihi halkaas ka dhacan maalmaha soo socda.
Maamulka Somaliland ayaa inta badan dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeya gobolka Sool; 2007 ayay ahayd markii ay Somaliland si xoog ah maamulka Puntland ugaga qabsatay magaalo madaxda gobolka Sool ee Laascaanood wixii mudadaasi ka danbeeyey ayaa maamulka Somaliland marar badan sheegay in ay qabsanayaan deegaanada ay ku magacaabaan xuduudahooda kuwaasi oo ay sheegeen inay ku eg yihiin halka lagu magacaabo Yoocadda oo ka tirsan xaafadaha galbeed ee magaaladda Garoowe.
Maamulka Puntland ayaa isagu u muuqday mudo dheer mid ka gaban-gaabsanaya dagaal dhexmara iyaga iyo Somaliland waxaana mudo badan iska daba tegey baaqyo nabadeed oo madaxda Puntland ku dalbayaan in deegaanaddaasi dagaal la’aan lagaga baxo; waxaana baaqyadaasi ay noqdeen kuwo aan la tixgelin, iyadoona hada ayba bilowdeen dagaalo iyo weeraro hor leh, lamana oga waxa maamulka Puntland xiligan ku dhaqaaqi doono.